Qarax miino oo dad ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQarax miino oo dad ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe
Hiiraan Xog, Feb 12 , 2018:- Qarax Miino oo aroortii hore ee saakay ka dhacay duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay inoo xaqiijiyeen dadka degaanka.
Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu qabsaday Gaari Dheyno ah, kaasi oo Dhuxul ka doonayay degaanada duleedka ka ah magaalooyinka Balcad.
Gaarigan ayaa Qaraxa waxa uu ku qabsaday xilli uu marayay degaanka Haansheekh, waxaa ku geeryooday Darawalka Gaariga kaxeynayay, halka uu ku dhaawacmay nin kale oo Gaariga la socday.
Ninka dhintay oo lagu magacaabi jiray Bishaar iyo ninki dhaawacmay ayaa waxaa la geeyay degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay sheegayaan dadka degaanka.
Maamulka degmada iyo Ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta Qaraxa ka dhacay, waxayna halkaasi ka wadaan baaritaano ku aadan sidii looga daba tegi lahaa raggii falkan ka dambeeyay.
Degaanka Haansheekh oo qiyaastii 7-KM ka xiga dhanka Waqooyi degmada Balcad ayaa waxaa inta badan Qaraxyada Miinooyinka ah lagula eegtaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, ilaa hadda Maamulka Hirshabeelle lama uusan imaan qorshe cad oo falalkan wax looga qabanayo.